Gbasara Anyị - UNIKE Technology Limited
Ndị injinia anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe LED na ndị ahịa anyị nwere ntụkwasị obi ga-enye nkwado na ọrụ ọrụ dị elu iji nyere gị aka ịgbasa ahịa gị ngwa ngwa ma hụ na ị nwere ahụmịhe azụmaahịa na-atọ ụtọ. Anyị nwere njikwa mma dị mma niile n'oge nrụpụta ọ bụla, gụnyere njikwa ihe na-abata, nyocha usoro nyocha, nyocha na-apụ na nyocha ndị ikwu. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịmepụta akara AQP na SPC dabere na ihe ndị ahịa chọrọ. Ihe ndị a niile na-enyere anyị aka ịkwado afọ ojuju ndị ahịa. Anyị factory na-ọma onwem dabara gị outsourcing mkpa, na dịgasị iche iche, ọgaranya ahụmahụ na elu na-arụ ọrụ uche nke anyị QC, anyị nwere ike belata bụla na-enweghị isi na-eri n'ihi na ị. Ihe ịga nke ọma anyị na-ekpebisi ike site na afọ ojuju na obi ike nke ndị ahịa anyị n'ihe anyị na-eme na etu anyị si eme ya.
Anyị Nkà & Ahụmịhe
Anyị na-akpachara anya họrọ ihe niile ma hụ na ngwaahịa niile agwụla ndị ahịa nwere ike izute na ọbụlagodi dị elu karịa atụmanya ha. Anyị na-ejikarị ọkụ ọkụ sitere na Lumileds, Osram na Cree, ọkọnọ ike sitere na Well Well, Philips, Inventronics, Sosen, Lifud na Done, yana nke anyị nke anyị UNIKE ike ọkọnọ. Na mkpokọta, ngwaahịa anyị nwere ike izute mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche site na njedebe ruo n'ahịa dị elu. Imirikiti ngwaahịa anyị nwere ike inye akwụkwọ ikike afọ atọ na ise maka ndị ahịa ịhọrọ. N'otu oge ahụ, anyị nwekwara ike ịhazi ngwaahịa dịka ihe ndị ahịa chọrọ ịgbatị nkwa dị mma ma ọ bụ ogologo ndụ na 7 ma ọ bụ ọbụna afọ 10.
Anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM na ODM maka ndị ahịa. Anyị nwere ike OEM ma ọ bụ mee LOGO laser marking n'efu, anyị nwekwara ike hazie igbe agba.
Uche ihe mgbaru ọsọ bụ “Quality mbụ, Ahịa gbakwasara, Mutual ntụkwasị obi, Ruru Eru ụlọ ọrụ”.
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ asambodo patent ngwaahịa, ọtụtụ ngwaahịa anyị bụ CE, RoHS, PSE, SAA na UL, na DLC akwadoro, bụ nke e rere karịa mba 100 gburugburu ụwa, wee merie otuto dị iche iche nke ndị ahịa. , na ọtụtụ ndị ahịa ịmepụta ogologo oge kwenye ekwenye mmekọrịta.